Ukuvavanya i-HTC ChaChaCha (III) | I-Androidsis
el_uliulius | | Ukusetyenziswa kwe-Android, nokuVavanyelwa, Reviews
Inxalenye yesithathu kunye neyokugqibela yokuphononongwa kwesiphelo seHTC. Emva kwe- icandelo lokuqala apho Sivavanye izixhobo zekhompyutha kunye Inxalenye yesibini apho sithetha khona ngesoftware, Siza kule yokugqibela apho siza kuvavanya ukusebenza kwesiphelo kwaye senze izigqibo malunga nale fowuni inokusinika yona.
Sinezandla zethu a I-Android 2.3.3 eneHTC Sense ebonisa ukuba icokisiwe. Njengoko benditshilo, amava ale nguqulo 'yomthunywa' wedesktop I-HTC ayinanto yokumonela kwezinye iiterminal zesitayile. Uhlobo oluthile lweediliya ze-E-uthotho lweefowuni zeNokia ziza engqondweni ngeSymbian okanye iBlackberry ethandwayo / ethandwayo. Mhlawumbi i-HTC ifuna ukubonelela ngemveliso ebavumela ukuba bafumane isabelo sentengiso esine-BB. Ngaba baphumelele? Ewe nohayi. Nangona kunjalo, ukubonelela ngesiphelo sendlela efanayo, ngesiphelo esihle kakhulu, enomtsalane, eyokugqibela kwi-Android, ayisiyiyo yonke into.
Ngokwesiqhelo kwinxalenye yesithathu ndenza umlinganiso ukuze ndibone ukuba zeziphi na iziphumo ezizayo kwaye ndikwazi (nangona zingazibopheleli konke konke ngefowuni elungileyo okanye embi) ukuthelekisa nezinye iitheminali. Akufanelekanga kulo mzekelo. Ukuvavanya imidlalo, ngenxa yehardware eyibandakanyayo, ayisiyonto isibonisa lukhulu. Ngelixa kudlalwa Iintaka ezinomsindo I-RIO inokubonwa kunzima ukuhambisa 'iigraphics' kunye nezipho zelag xa uphosa iintaka okanye uhambisa imiboniso.
Ukukhankanywa okhethekileyo kufanelekile ikhibhodi, ebuyiselwe emva, ikhululekile kwaye inobuqili ngokukhawuleza ukuyisebenzisa, iyakwenza uncokole okanye ubhale ii-imeyile ngokukhawuleza. Njengoko sele nditshilo, le fomathi yekhibhodi ebonakalayo iya kubonwabisa abo bavela kwiBlackberry, nokuba asinayo i-BBMessenger, sine-App kunye nezinye ezininzi. Gcina ukhumbula ukuba esi siginali sinekhamera yangaphambili yokuyisebenzisa kwiifowuni zevidiyo kunye neenkqubo ezifanelekileyo.
La Ibhetri ihlala ixesha elide. Kuqatshelwa ukuba isikrini sisebenzisa amandla amancinci kakhulu. Awuyi kuba nangxaki yokuchitha usuku kumandla ebhetri. Ukutshaja ngokukhawuleza kwaye kuyakuvumela ukuba usebenzise i-terminal iiyure kunye neeyure.
Ukuza kuthi ga ngoku, kulungile. Ngoku kuza okubi. Ukuqala ngo Ikhusi. Incinci kakhulu. Ukuba ujonga ifowuni kule fomathi yekwerty ebonakalayo, ubungakanani obuncinci okanye isisombululo esiphakamileyo siya kuthakazelelwa. Kunzima ukusebenzisa ithuba leemultimedia zetheminali enomfanekiso omncinci. Elinye inqaku elibuthathaka, izixhobo zekhompyutha. Ukuba i-HTC ifuna ukubonelela ngesiphelo esinokulwa ne-BB, kufanelekile ukuba babeka amandla ezingakumbi zehardware, iprosesa ye-800MHz ayibonakali ngathi ininzi kum, ithathela ingqalelo iiterminal ezinje ngeTattoo yeHTC esele inikezele ngale processor. Imemori, null. I-512Mb ikushiya kwi-120Mb yokufaka iinkquboOko kukuthi, iintaka ezinomsindo, i-twitter, umfundi weGoogle, kwaye iphelile. Imemori yememori ephantsi. Inkumbulo efanayo yayisele inikezelwe kwi-Nexus One kwaye kwakungekho mfuneko yokuba 'ithwale' ngeHTC Sense. Elinye inqaku elingathandekiyo, kwaye lixhomekeke ngqo kule nto ikhankanywe apha ngasentla, yikhamera yevidiyo, engakwaziyo ukurekhoda ividiyo kwi-720p.
Ndingayincoma le fowuni kubahlobo bam? Ezimbalwa. Abo bafuna ifowuni kwaye abacwangcisi ukufaka nantoni na, okanye baya kuphelelwa yimemori njengoko kwenzekile kwi-HTC Desire, kwiTattoo ... I-HTC iphindaphinde iimpazamo. Yenza i-terminal eyi-10% ibize kakhulu ngokubandakanya imemori engaphezulu kwe-256MB kunye nokuphakamisa iprosesa kwi-1GHz, enokuyivumela ukuba irekhode kwi-HD kwaye ibe nokuqaqamba okungaphezulu, esi sigxina siya kufumana okuninzi ukujongana nee-BB. I-HTC ineendlela ezingcono nezinomdla ngakumbi, ezinje ngeWildfire S, nokuba ayinayo ikhibhodi ebonakalayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukuvavanya i-HTC ChaChaCha (III)
Igajethi endilisekileyo kodwa ndiyayicaphukela igama layo lobudenge. bayokubeka amandla angcono okanye ihashe okanye ndiyazi
Kububuxoki ukuba ifowuni ikushiye i-120Mb yokufaka usetyenziso. Ngenxa yoko kukho indawo ye-SD apho unokubeka khona ikhadi. Le yindlela esebenza ngayo kwiifowuni ezininzi ze-Android. Ukufaka usetyenziso kwi-SD kuqhelekile phantse unyaka.
Ayizizo zonke iiapps ezikuvumela ukuba uzihambise kwi-SD
Izicelo eziya kwi-SD zihlala kwimemori yangaphakathi, zincinci, kodwa zihlala.
Isisombululo siya kufana nakwezinye iifowuni ze-HTC: ingcambu + ephekwe i-rom + a2sd ngesahlulelo se-ext4.
Ndikholelwe ... Sele ndihlupheke kwimemori engalunganga kwiTattoo nakwinqwenela. Kwenzeka into efanayo kule fowuni.
Zonke ii -apps zihanjiswa kwi-SD nge-Force2SD-
Hayi, zonke azinako ukuhambisa, ndinayo le mobile kwaye umzekelo i-tuenti okanye i-whatsaap ayindivumeli ndiyisuse.
Mnumzana, zenzele uxwebhu kakuhle, ibhekisa kwimemori yangaphakathi. Ndinayo loo fowuni kwaye kwenzeka ntoni kum, inkumbulo ephantsi. Into angayithethanga kukuba kushushu ngakumbi kunam xa ndibona intshontsho elishushu, kwaye ikhibhodi ebonakalayo inengxaki kwicala lasekunene eligcina ngokwenza ukuba i-p ingasebenzi, i-backspace, intro, o, i, l, k?,? m kunye nezinye ezingaphezulu. Amava kukuba kudlule kwiitheminali ezintathu ezilinganayo. le yokugqibela iqala ukwenza okufanayo. Into endiyibonayo kukuba iimvavanyo azinzulu kakhulu.
Andazi phantse nto malunga neefowuni eziphathwayo, ke andazi ukubala imemori endiyifunayo okanye endiza kuyisebenzisa ...
Yintoni elingana ne-120MB yasimahla? Oko kukuthi, yintoni endinokuyigcina kwiselula yam?
Lowo wenze uvavanyo kule fowuni kufuneka aziswe ngcono ukuba? ayizizo zonke izinto ezimbi;);)
Mka wena !! Thatha yaa sitsho
Ndiyayithanda le mobile, umhlobo wam unayo kwaye intle kakhulu, ndine-iphone4 kwaye ndiza kuthenga ezi-5, kwaye le htc cha cha cha, inezinto ezifanayo kakhulu, nangona i-iPhone ingcono kakhulu, Isikrini u Izinto ezininzi zingcono, kodwa esi siselfowuni elungileyo
Phendula kuwe jodeis !! Thatha yaa
Ngaba iselfowuni elungileyo ngoko okanye akunjalo? Ndinamathandabuzo okuba ndiyayithenga
Intlungu ebuhlungu sitsho
Ndinayo i-cha cha cha kwaye akukho ndlela yokubona ii-imeyile abandithumelela zona, ndiyazivula ndizikhuphele kwaye emva koko ithi ayinakwenzeka ukubona ifayile.
Inyani yile ndinayo i-htc chachacha, kwaye ndiqhuba kakuhle kakhulu andizukuyitshintsha x nayiphi na enye, iyasebenza kwizinwele endizithandayo.
Ngokoluvo lwam, izitshixo zotolo ziyinto eluncedo kakhulu endiyiphosayo kwiitheminali ezininzi ngekhibhodi ebonakalayo